Mwedzi yegore muFrench - UniProyecta
Mwedzi yegore muFrench
Nhasi muchinyorwa chino isu tichakudzidzisa matauriro aungaita iyo mwedzi yegore muchiFrenchIsu tichakuudzawo mataurirwo emazuva nemwaka zviripo, uye pakupedzisira isu tichakuudza mamwe matipi madiki ekuti ukwanise kudzidza chiFrench nekukurumidza uye nyore. Pasina imwezve ado ngatiendei kune iyo dzidziso.
1 Mazuva evhiki muFrench
2 Mwedzi yegore muFrench
3 Mwaka muFrench
4 Iwe unoti sei makadhinari anonongedza muchiFrench?
Mazuva evhiki muFrench
Sekuziva kwako, mazuva evhiki, angave mumutauro wako kana mune mumwe, anoshandiswa zuva nezuva kutumidza mazuva aunofanira kushanda, paunenge uine ongororo, paunenge uine musangano wechiremba nezvimwe zvinhu. Sezvauchaona, zvakakosha kuti uzive, ndosaka nhasi tichakuratidza mataurirwo emazuva evhiki muchiFrench.
Muvhuro ——--> Muvhuro
Mardi ——--> Chipiri
Mercredi ——--> Chitatu
Jeudi ——--> China
Vendredi ———-> Chishanu
Samedi ——--> Mugovera
Dimanche ——--> Svondo
Sezvauchaona, haina misiyano mizhinji mumazwi zvirinani achienzaniswa neSpanish, saka zvichave nyore kwazvo kwauri kuti ubate nemusoro uye udzidze iwo.
Zvichienzaniswa nemazuva evhiki, mwedzi yegore muchiFrench zvinonyanya kuoma kudzidza asi hazvigoneke, kana iwe uchinzwa kuda kuzviita iwe unogona, saka nyatsoteerera uye dzokorora zvadzokororazve kusvikira mwedzi gumi nembiri yeanus .
Janvier ——--> Ndira
Février ———-> Kukadzi
Mars ——--> Kurume
Avril ——--> Kubvumbi
Mai ——--> Chivabvu
Jini ——--> June
Juillet ———-> Chikunguru
Août ———-> Nyamavhuvhu
Nyamavhuvhu ———-> Gunyana
Gumiguru ———-> Gumiguru
Mbudzi ———-> Mbudzi
Zvita ———-> Zvita
Sezvaungave wakacherekedza, mimwe mwedzi chete mamwe mavara anochinjwa uye mune mamwe mazwi anochinjwa zvizere, saJanuary, Nyamavhuvhu naKukadzi. Kune vanhu vazhinji vanodzidza kana kudzidza mwedzi yegore muchiFrench, iyi mwedzi mitatu yakataurwa inowanzo kuve yakaoma, saka kana iwe usingakwanise kudzidza kana kuiisa mumusoro, usazvidya moyo nekuti zvakajairika.
Mwaka wakakosha kwazvo, nekuti zvinoshandura mapfekero edu kana dzimwe nguva zvinotirwarisa nekuda kwekuchinja kwadzo kamwe kamwe mukushisa. Izvi zvinotaurwa seizvi:
Automme ——--> Autumn
Hiver ——--> Nguva yechando
Printemps ———-> Chitubu
—Té ———-> Zhizha
Mwaka yacho inofambidzana nezvirungamidzo zvakare, senge:
Iwe unoti sei makadhinari anonongedza muchiFrench?
Ipapo tichazokuratidza pazasi pano kuti makadhinari anotaurwa sei, kutanga isu tinokuudza iwe izwi muchiFrench uyezve muchiSpanish.
Izvozvi zvawava kuziva chinenge zvese, isu tinokuratidza mimwe mienzaniso mitsara kuti iwe ugone kucherechedza zvawadzidza:
C'est dimanche, aujourd'hui —————-> Nhasi iSvondo
Quel jour est-ce aujourd'hui? —————-> Izuva ripi nhasi?
C'est lundi, aujourd'hui —————-> Nhasi Muvhuro
C'est le dix octobre, aujourd'hui —————-> Nhasi uno Gumiguru
C'est le premier janvier, aujourd'hui —————-> Nhasi wekutanga waNdira
Kupedza ichi chinyorwa chakakumikidzwa kumwedzi yegore muchiFrench, tinoda kukuudza mamwe matipi ayo achakubatsira iwe zvakawanda kudzidza mutauro wataurwa.
Sekutanga kurudziro, zviri nyore kuti iwe utaure nemunhu akararama kana anogara muFrance kana imwe nyika ine mutauro mumwe chete. Usatya kutya kukanganisa kana kunyara nekuti unodzidza zvakawanda kubva mukukanganisa. Kana ukadaro, iwe uchaona maitiro aunofambira mberi mukuvandudza uye uchave uine mashoma mashoma zvikanganiso. Sezvo nguva inopfuura, iwe unozoona kuti yako French yavandudza uye ikozvino iwe unozokwanisa kuitaura zvakatsetseka uye pasina kutemwa.
Chekupedzisira, tinokukurudzira kuti udzidze mazwi uye zvirevo zvingangokubatsira, izvo zvatinoda kukuudza ndezvekuti iwe haudzidze zvemukati mumitsara iwe yausingazomboshandisa kune imwe nguva.
Nenzira iyi zvichave zvinokurumidza kudzidza uye iwe uchachengetedza nguva, iwe unonzwa zvakare kukurudzira nekuti izvo zvawakadzidza iwe unogona kuziva zvakanaka uye ivo vanokuita iwe unzwe kuda kuenderera nemutauro unoshamisa uyu.
Izvi ndezve izvozvi, tinovimba wakazvifarira, ikozvino yave nguva yako yekutevera uye kudzidza zvemukati zvakapihwa, kana zvichikuitira nyore, isu tinokusiira vhidhiyo inotsanangura yenyaya Rombo rakanaka!
Categories French, Mitauro Kubatikiti kufamba
Nhamba dzeArabic kubva 1 kusvika 1000
kudzidziswa » Mitauro » French » Mwedzi yegore muFrench
Mavara echiFrench uye mataurirwo awo
French manhamba kubva 1 kusvika 1000